Myanmar has agreed to the proposed appointment of Mr. Bhim K. Udas as Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the Federal Democratic Republic of Nepal to the Republic of the Union of Myanmar – Ministry of Foreign Affairs
The Government of the Republic of the Union of Myanmar has agreed to the proposed appointment of Mr. Bhim K. Udas as Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the Federal Democratic Republic of Nepal to the Republic of the Union of Myanmar.
Mr. Bhim K. Udas was born in 1950. He gotaBachelor’s Degree of Arts from the Tribhuwan University, Nepal in 1970 andaMaster’s Degree from University of Peshawar, Pakistan in 1983. He served in United Nations World Food Programme for (30) years from 1981 to 2010 at different positions in the Russian Federation, Jordan, Switzerland, Armenia, Italy and Pakistan as well as in Myanmar (October 2003-September 2006), India (August-October 2009) and South Africa (September 2006-December 2010). He also served as Honourary Consul of Jordan until February 2017. He is married.
မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ နီပေါနိုင်ငံ သံအမတ်ကြီးအဖြစ် မစ္စတာ ဘင်း ကေ အူးဒက်စ် အား ခန့်အပ်ရန် သဘောတူ
ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်ဆိုင်ရာ အထူးအာဏာကုန် လွှဲအပ်ခြင်းခံရသော နီပေါနိုင်ငံ သံအမတ်ကြီးအဖြစ် မစ္စတာ ဘင်း ကေ အူးဒက်စ် အား ခန့်အပ်ရန် အဆိုပြုချက်ကို ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရက သဘောတူညီပြီး ဖြစ်သည်။
မစ္စတာ ဘင်း ကေ အူးဒက်စ် ကို ၁၉၅၀ ပြည့်နှစ်တွင် မွေးဖွားခဲ့ပြီး ၎င်းသည် ၁၉၇၀ ပြည့်နှစ်တွင် နီပေါနိုင်ငံ၊ Tribhuwan တက္ကသိုလ်မှ ဝိဇ္ဇာဘွဲ့ကိုလည်းကောင်း၊ ၁၉၈၃ ခုနှစ်တွင် ပါကစ္စတန်နိုင်ငံ၊ Peshawar တက္ကသိုလ်မှ မဟာဝိဇ္ဇာဘွဲ့ကိုလည်းကောင်း ရရှိခဲ့ပါသည်။ ၎င်းသည် ၁၉၈၁ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလမှစတင်၍ ကုလသမဂ္ဂကမ္ဘာ့စားနပ်ရိက္ခာအစီအစဉ်တွင် နှစ်ပေါင်း(၃၀)ကြာ တာဝန်အသီးသီး ထမ်းဆောင်ခဲ့ရာ ရုရှား၊ ဂျော်ဒန်၊ ဆွစ်ဇာလန်၊ အာမေးနီးယား၊ အီတလီနှင့် ပါကစ္စတန်နိုင်ငံတို့တွင်လည်းကောင်း၊ ၂၀၀၃ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလမှ ၂၀၀၆ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလအထိ မြန်မာနိုင်ငံ၌ လည်းကောင်း၊ ၂၀၀၉ ခုနှစ်၊ သြဂုတ်လမှ အောက်တိုဘာလအထိ အိန္ဒိယနိုင်ငံ၌လည်းကောင်း၊ ၂၀၀၆ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလမှ ၂၀၁၀ ပြည့်နှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလအထိ တောင်အာဖရိကနိုင်ငံ၌လည်းကောင်း ကုလသမဂ္ဂကမ္ဘာ့စားနပ် ရိက္ခာအစီအစဉ်၏ ရာထူးအဆင့်ဆင့်၌ တာဝန် ထမ်းဆောင်ခဲ့ပါသည်။ ၎င်းသည် ၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလအထိ ဂျော်ဒန်ဂုဏ်ထူးဆောင်ကောင်စစ်ဝန်ချုပ်အဖြစ် တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပါသည်။ ၎င်းသည် အိမ်ထောင်ရှင်တစ်ဦး ဖြစ်သည်။
ရက်စွဲ၊ ၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ မေလ ၄ ရက်။